Munhu anoteerera uye nemapere | Apg29
Munhu anoteerera uye nemapere
Ndichaita kufunga kwangu yekare mienzaniso muna Kristu kuti paiva mumakore angu okutanga somuKristu. Vakandipa zano uye nyaradzo, asiwo vakatsiura.
In Skellefteå Ndakaona vechiduku vakawanda vanouya kutenda uye isu chaizvoizvo aigara Church. Mudzimu waMwari sokuti zvikuru uye ndinoonga kuti somuKristu wechiduku aifanira kuona izvi. Ndinotenda kune vanababa izvi navanaamai vakateerera uye wakandisengera.
Vamwe munoziva ndaigara kuchamhembe Sweden kwemakore 23 hwangu. Winter akanga zvinoshamisa rakanaka zvikuru chando kuti zvino isisina muna gnällbältet apo Mwari vakauya neni zvako.
In Skellefteå randaigara 1991-1994 mins saka I bönetanten Anna-Maja, airatidzika asina chaizvo uye haana kuita ruzha hombe chechi yePentekosti apo ndakanga ndichishanda. Akamunzwira kuonana kudenga uye akaziva simba romunyengetero aigona kuita.
Kazhinji ndaiva Anna-Maja wake, ndakanzwa nechivimbo. Ndakaudza wangu muduku kuda kumunetsa uye iye akandibvunza.
Zvakandiomera nhasi kuwana vaKristu kuvimba
Nhasi ndinoziva zvakaoma kuwana vaKristu kuvimba uye kunyengetera pamwe chete, zvinosuwisa. Kuwana munhu achateerera michero riri kuoma nhasi kuwana. Tinofanira kudzidza kuteerera mumwe uye Takuriranai mitoro.
Ini handisi munyori zvakanakisisa, asi kunyora kubva utera hwangu uye marwadzo. ndiye simba rangu uye rukudzo Jesu Kristu Muponesi wangu uye netariro.
Ndinoda kurarama kufanana Anna-Maja akaita guru paine kupikisana kwakadaro, asi iye aiziva kuti vaviri vachinyengetera maoko kuita umambo hwaMwari. Rudo Sven uye kuzarura musha waiva chinhu Ndaitofanira kuyeuka. Bridget uye Martin vakanga yokubatidza kuti Kristu.